AMATATTOOS AMA-50 OCIMIMLILO KULUNTU -IINGCINGA ZAMADODA ZOMLILO - UHLOBO
AmaTattoos ama-50 oCimimlilo kuLuntu -Iingcinga zamadoda zoMlilo
Xa ucinga ngamagorha, umcimi-mlilo kudala ekhonza kwisikhundla sobomi bokwenyani uSuperman. Kumntwana ovaleleke ngaphakathi kwisakhiwo esivuthayo esivuthayo, kungaphezulu kokuhlangulwa okuhloniphekileyo, luxanduva lokuba ngumsindisi wobomi.
Ngabacimi-mlilo abangaphezu kwesigidi e-U.S, nangaphezulu kwama-800,000 kubo abangamavolontiya, amathuba okuba ube uligorha lemihla ngemihla aphezulu kakhulu.
Ukungathethi, kunjalo ke ngamaqondo obushushu omlilo abahamba ngenkalipho. Kwaye nangona inokubonakala ilula xa uyijonga kuqala, inyaniso kukulwa imililo yinkqubo entsonkothileyo neyingozi.
Cinga ngemigangatho yokungena ngaphakathi, iindonga ziqengqeleka ngokungathi yiteki yamakhadi, kwaye kunjalo umsi kwaye amadangatye atshisa ulusu okanye ngaphezulu, abulale. Ngoku, inqaku kuzo zonke iigesi eziyityhefu ezikhutshiweyo kwaye kufuneka uzulazule ngeenxa zonke kwizixhobo ezikhuselayo. Kuvakala kunzima ngakumbi ngoku, akunjalo?
Ngaphezulu, andikaze ndizise ukwaphuka kwezithuthi phakathi kwezinye iimeko ezinobungozi eziphezulu zokuhlangulwa ngumcimi-mlilo ebomini babo.
Kungakhathaliseki ukuba, ndibeke ndawonye isikhokelo sezona zixhobo eziphezulu zokucima umlilo ze-50 zamadoda ukukunceda wenze izimvo ezahlukeneyo. Ukusuka kumasebe omlilo ukuya kwi-EMS ekhusela umhlaba wasendle kunye neendawo ezisezidolophini, ezi zikhumbuzo kunye neerhafu uyilo lwe tattoo ngokuqinisekileyo ziya kukhuthaza. Ukuba ubunebhloko lokuyila, kuya kucinywa!
1. Ingalo yomlilo Iitattoos
2. Ingalo yomCimi-mlilo
iiTattoos ezincinci ezinqamlezayo zamadoda
3. Umkhono weTattoos yomcimi mlilo
Uyilo olulula olumnyama lwe tattoo
4. IiTattoos zeBicep zokucima umlilo
5. IiTattoos zokucima umlilo esihlahleni
6. Iitattoos zomlilo zesifuba
7. Umva Umcimi-mlilo iiTattoos
8. Icala lokucima uMlilo
9. IiTattoos zomlenze womlilo
10.IeTattoos zomcimi mlilo
11. Ikhakhayi loMcimi-mlilo
umnyango ofihliweyo kwiphaneli eludongeni
uYesu kwi tattoo yomnqamlezo
Iibhothi ezenziwe kakuhle kwihlabathi
iinwele ezimfutshane zamadoda aneenwele ezithe nkqo
inkolo yesiqingatha semikhono yamathambo engalo
yeyiphi ihempe enemibala ehambelana neebhulukhwe eziluhlaza
ibhola yedragoni uphawu lwe tattoo